1 Samueri 1 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
1 Samueri 1:1-28
1 Zvino kwaiva nomumwe murume wokuRamataimu-zofimu+ iri munharaunda ine makomo yaEfremu,+ ainzi Erikana,+ mwanakomana waJehoramu, mwanakomana waErihu, mwanakomana waTohu, mwanakomana waZufi,+ muEfremu.
2 Iye akanga aine madzimai maviri, mumwe ainzi Hana, uye mumwe wacho ainzi Penina. Penina akava nevana, asi Hana akanga asina vana.+
3 Gore negore murume iyeye aibva muguta rake kuti anogwadamira+ uye anobayira kuna Jehovha wemauto muShiro.+ Vanakomana vaviri vaEri, Hofini naFiniyasi,+ vaiva vapristi vaJehovha+ ikoko.
4 Zvino rimwe zuva Erikana paakabayira chibayiro, akapa Penina mudzimai wake nevanakomana vake nevanasikana vake vose migove;+
5 asi akapa Hana mugove mumwe chete. Zvisinei iye aida Hana,+ asi Jehovha akanga avhara chibereko+ chake.
6 Mukadzinyina wake aimunetsawo+ kwazvo achiitira kuti avhiringidzike nokuti Jehovha akanga avhara chibereko chake.
7 Ndizvo zvaaiita gore negore,+ kazhinji paaienda kuimba yaJehovha.+ Ndiwo manetsero aaimuita, zvokuti aisvimha misodzi uye aisadya.
8 Zvino Erikana murume wake akati kwaari: “Hana, unosvimhirei misodzi, unoregererei kudya, mwoyo wako unonetsekerei?+ Handisi nani kwauri kupfuura vanakomana gumi here?”+
9 Hana akabva asimuka vapedza kudya nokunwa vari muShiro, mupristi Eri paaiva akagara pachigaro chaiva pedyo negwatidziro retemberi+ yaJehovha.
10 Akanga aine mweya waishungurudzika,+ akatanga kunyengetera kuna Jehovha,+ akasvimha misodzi kwazvo.+
11 Akapika+ akati: “Haiwa Jehovha wemauto, chokwadi kana mukatarira kutambudzika kwomurandasikana wenyu,+ mukandiyeuka,+ mukasakanganwa murandasikana wenyu uye mukapa murandasikana wenyu mwana mukomana, ndichamupa Jehovha mazuva ose oupenyu hwake, uye musoro wake hauzoveurwi nechisvo.”+
12 Paainyengetera kwenguva refu+ pamberi paJehovha, Eri akanga akatarira muromo wake.
13 Hana akanga achitaurira mumwoyo make;+ miromo yake ndiyo yaingodedera, uye inzwi rake rakanga risinganzwiki. Asi Eri akafunga kuti akadhakwa.+
14 Naizvozvo Eri akati kwaari: “Ucharamba wakadhakwa kusvikira rini?+ Pengenuka pawaini yako.”
15 Hana akapindura kuti: “Aiwa, ishe wangu! Ndiri mukadzi ane shungu; handina kunwa waini nedoro rinodhaka, asi ndiri kudururira mweya wangu pamberi paJehovha.+
16 Musaita kuti murandasikana wenyu aite somukadzi pasina,+ nokuti ndataura kusvikira zvino nokuda kwokunetseka kwangu kukuru uye kutambudzika kwangu.”+
17 Eri akabva apindura kuti: “Enda norugare,+ uye Mwari waIsraeri ngaakupe chikumbiro chako chawamukumbira.”+
18 Iye akati: “Mushandikadzi wenyu ngaanzwirwe nyasha nemi.”+ Mukadzi wacho akaenda, akadya,+ uye chiso chake hachina kuzonetsekazve.+
19 Vakabva vafumomuka, vakagwadama pamberi paJehovha, vakazodzokera, vakasvika kumba kwavo muRama.+ Zvino Erikana akarara+ naHana mudzimai wake, Jehovha akatanga kumuyeuka.+
20 Naizvozvo gore rava kunopera, Hana akava nepamuviri, akabereka mwanakomana, akamutumidza+ kuti Samueri, nokuti akati, “ndakamukumbira kuna Jehovha.”+
21 Kwapera nguva yakati, murume wacho Erikana akaenda neimba yake yose kunobayira Jehovha chibayiro chegore negore+ nechinopiwa chake chemhiko.+
22 Asi Hana haana kuenda,+ nokuti akanga ati kumurume wake: “Kana mukomana angorumurwa,+ ndichauya naye, ave pamberi paJehovha, agareko nokusingagumi.”+
23 Murume+ wake Erikana akabva ati kwaari: “Ita zvakakunakira.+ Sara pamba kusvikira wamurumura. Jehovha ngaangoita zvaakataura.”+ Naizvozvo mukadzi wacho akasara pamba, akaramba achiyamwisa mwanakomana wake kusvikira amurumura.+
24 Naizvozvo paakangomurumura, akaenda naye, pamwe chete nenzombe ine makore matatu neefa imwe chete yefurawa nechirongo chikuru chewaini,+ akapinda muimba yaJehovha yaiva muShiro.+ Uye aiva nomukomana wacho.
25 Vakabva vauraya nzombe yacho, vakauya nomukomana wacho kuna Eri.+
26 Naizvozvo akati: “Pamusoroi, ishe wangu! Noupenyu hwomweya wenyu,+ ishe wangu, ndini mukadzi uya akanga akamira nemi munzvimbo ino kuti ndinyengetere kuna Jehovha.+
27 Ndakanyengetera pamusoro pomukomana uyu kuti Jehovha andipe chikumbiro changu+ chandakamukumbira.+
28 Iniwo, ndamupa Jehovha.+ Mazuva ose aanenge ari mupenyu, ndiye akakumbirirwa Jehovha.”
Zvino iye akakotamira Jehovha ipapo.+